Coulda मलाई आउनुभएको छ — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
कि एरिक गार्नर भिडियो हेर्न तहसनहस छ किनभने म चोट छु. जब पहिलो मेरी श्रीमती र म यसलाई महिना पहिले हेर्नुभयो, हामी दुवै कराए. जीवन एक सुन्दर उपहार हो, र यो विचारणीय छ कि जीवन कसैको शरीर छोडेर हेर्न - यो अन्य मानिसहरूले लिएको गर्नुपर्छ विशेष गरी जब. मैले सोचें, "पक्कै मान्छे संग दूर प्राप्त गर्न सक्दैन. कम से कम उनि एक परीक्षण मा आफ्नो कार्यहरू लागि जवाफ हुनेछ। "
म गलत लाग्यो. र दुख्छ.
यो अमेरिका मा एक काला मान्छे हुन खतरनाक किनभने म चोट छु. मलाई थाहा एक्लै कि कथन केही मानिसहरूलाई आपत्तिजनक छ, तर यो objectively साँचो हो.
किनभने कालो समुदाय चोट छन् म चोट छु, किनभने धेरै जटिल मुद्दाहरूको साथ limping.
म किनभने म विगतमा पुलिस संग थियो गर्नुभएको अनौठो रन-इन्स को चोट छु.
म थाहा हरेक कालो मानिस थियो किनभने समान रन-इन्स चोट छु.
खराब पुलिस कठिन असल पुलिस तिनीहरूले भनिन्छ गरिएको गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण काम गर्न बनाउन किनभने म चोट छु.
म मेरो छोरा सिकाउन छ किनभने मेरो बुबा थियो नै कुरा मलाई सिकाउन चोट छु: "मानिसहरू तिनीहरू तपाईं बारेमा केही थाहा अघि तपाईं खतरा हुनुहुन्छ मान गर्नेछ, ताकि तपाईं आफ्नो सेतो मित्र भन्दा बढी होसियार हुनुपर्छ। "
किनभने केही मानिसहरू मतलब छैन म चोट छु. तिनीहरू बरु जो चोट ती संग चोट भन्दा एक तर्क जित्न चाहन्छु.
म चोट छु अधिकारीहरूले हामीलाई बाँकी पिरोल्ने पाप र brokenness गर्न प्रतिरक्षा छैनन् किनभने. जब प्रहरी गल्तीको लागि बोलाइएको हो गर्नेहरूलाई आफूलाई यो दोषी छन्, जहाँ हामी बारी गर्न? म ठूलो कसैले बारी छ किनभने म आनन्दित, परमेश्वरको अन्त न्याय ल्याउनेछ किनभने म आशा छ. तर म चोट छैन छु होइन.
म चोट छु मिडिया कभरेज प्राप्त गर्ने विपत्ति आइलाग्यो मात्र विपत्ति आइलाग्यो छैनन् किनभने. त्यहाँ धेरै छन्.
मेरो साथी को लागि भनेर बुझ्न छैन, कृपया सुन्न समय लाग्न र समानुभूति. "सुन्न छिटो र बोल्न ढिलो" नम्रता र परिपक्वताको चिनारी भइरहेको छ. तपाईं आपत्ति अघि, ती सुन्न गर्न एक क्षण लिन जो चोट छन्.
हामी आफूलाई गर्न लाग्छ किनभने हामी यति धेरै चोट छन्, “यसले मलाई भएको छु सकेन।”
*गीत गर्न गीत पढ्नुहोस् यहाँ
यहोशू • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:30 बजे • जवाफ
Fam यसलाई गरौं. म आफ्नो पीडा महसुस
सिस्को • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:30 बजे • जवाफ
Coulda मलाई भएको !!
यर्मिया • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:32 बजे • जवाफ
म एउटै विचार भइरहेको छ, र जीवन पनि अधिक कसरी लगिएको गर्न सकिन्छ र त्यो व्यक्ति परमेश्वरको थाह बिना मर्न सक्छ. यो साँच्चै मलाई scares पनि मलाई दुख्छ <3
सानालाई • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:37 बजे • जवाफ
हो प्रभु, यो राम्रो छ
मार्को • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:38 बजे • जवाफ
तपाईं संग चोट, म स्थिति बुझ्न dont 100% कुनै तरिका म सकेजति. म येशूको बुझ्ने र जो हामी जस्तै जीवन बिताउन पर्छ. हिड्ने, संघर्ष, चोट र सँगै प्रयास.
sam • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:40 बजे • जवाफ
आफ्नो हृदय बाँड्नु भएकोमा धन्यवाद, र आफ्नो प्रतिभा प्रयोग संगीत यसलाई राख्न. यो sickens र मलाई saddens मान्छे हत्या भइरहेका छन् कि मात्र, तर पनि यति धेरै (धेरै professing मसीहीहरूले सहित) को दुख र अन्याय हेर्न इन्कार.
“किनभने केही मानिसहरू मतलब छैन म चोट छु. तिनीहरूले बरु चोट गर्नेहरूलाई साथ दुख भन्दा एक तर्क जित्न चाहन्छु।”
त्यसैले, त्यसैले साँचो, यात्रा. :(
प्रार्थना गर्नुहोस्, मेरा भाइहरू प्रार्थना & बहिनीहरू.
MelissaMcKim • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:40 बजे • जवाफ
म साँच्चै यो गीत किन्न चाहनु!
तपाईं यात्रा धन्यवाद
तपाईं यति धेरै मन के महसुस गरे
यो मलाई ministered
तपाईंको उपहार प्रयोग र हामीलाई सबै संग साझेदारी गर्नु भएकोमा धन्यवाद
KIRK • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:45 बजे • जवाफ
म calera देखि एक मूल निवासी अमेरिकी हुँ, ओक्लाहोमा. म एक चोक्ट भारतीय र एक जोडी सप्ताह पहिले Ferguson बारे सुनवाई र यो आजको युगमा फरक दौड हुनुको कठिन छ कारण म घृणा र दुखाइ बुझ्न सकिएन पछि मात्र तिनीहरूले छाला को हरेक रंग तिनीहरूले परमेश्वरको प्रचार गर्न हाम्रो स्वतन्त्रता लिइरहेका छन् घृणा गर्छन् र हामी हाम्रो जब कारण गुमाउनु वा खराब छ तर म यो संसारमा राम्रो प्राप्त हुनेछ प्रार्थना तर म सधैं परमेश्वरले खराब वा हामी बस विश्वास आवश्यक र हामी अब हामी छैन कुरा हो राम्रो कि सबै को लागि एक योजना छ सम्झना बरु परमेश्वरको तिर झुकाव को सरकार मा धेरै निर्भर !
टायलर • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:47 बजे • जवाफ
तपाईंलाई मनपर्ने भाइ. असल लडाइँ जारी राख्नुहोस्. तपाईं को लागि प्रार्थना.
जोर्डन • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:48 बजे • जवाफ
एउटा अचम्मको गीत. सुन्न र सिक्न युवाहरूलाई लागि आवश्यक. यात्रा यो राख्न
योएल बेन्जामिन Neve आइल्यान्डर • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:52 बजे • जवाफ
म यहा युगान्डा छु तर मेरो हृदय साथै भारी छ. त्यसैले भारी. एरिक गार्नर, मर्मत चावल, माइक भूरा. त्यसैले भारी.
DustinSimmons • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:56 बजे • जवाफ
राम्रो आदर मामिला र संसारको नजरमा छैन अनदेखी गरिने कालो जीवन प्रतिनिधित्व. हामी धरती मा हाम्रो छोटो यात्रा बेलामा भरोसा गर्नुभएको एउटा प्रणाली हामीलाई असफल भएको छ, बारम्बार, बिन्दु हामी हाम्रो प्रियजनहरूलाई र एकअर्काप्रति भयभीत बन्न. मलाई आशा छ हामी सबै प्रभु मा हाम्रो आँखा सेट र एक नजिक रूपमा मान्छे बढ्न सक्छ, परमेश्वरको मान्छे. विश्वास र कठिन काम बलियो रहन, GAWVI र यात्रा ली! अनुग्रह र शान्ति!
Neal_Spencer • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:56 बजे • जवाफ
म सिर्फ तपाईं सन्देश पठाउन चाहन्थे. मानिस, सप्ताह को पछिल्लो दम्पतीले मलाई पनि कली लागि कठिन भएको छ. म एक प्रहरी अधिकारी छु र यो मेरो मनपर्ने मान्छे केही देखेर साँच्चै कठिन भएको (Rappers, गायक, मित्र, आदि) प्रहरी बारेमा तिनीहरूले छ बाटो कुरा. सुरुमा म रिसाए, निराश, र तिनीहरूले हाम्रो काम छ कसरी कठिन बुझे कसरी गर्न बारेमा दुनिया तर्क गर्न तयार, यो समयमा हुन सक्छ कसरी डरलाग्दो बारेमा… म एक फुटेर बस्ने थियो अनुमान, म मुद्दा पढ्न किनभने थप, अधिक म मेरो साथी कुरा, बारेमा पुलिस थप रोकियो गरिएको छ कसरी y'all गरेको स्थितिहरुमा पढ्न, थियो आफ्नो कार थप खोजी, यसपछी यति… म सिर्फ आफु साँच्चै सम्पूर्ण विषयमा निराश रही फेला.
म वाहन रोक मेरो आफ्नै तरिका छ. म धेरै शाब्दिक कुराहरूमा आधारित तिनीहरूलाई रोक्न 80% समयको (समयावधि समाप्त दर्ता, बीमा, आदि) किनभने छ मेरो “colorblind” मान्छे सम्पर्क बाटो. अन्य त्यसपछि 20% समय छ कार म थियो नै मिशन संग tasked यदि म विश्वास एक प्रहरी अधिकारी गरेको प्रशिक्षण लाग्छ थियो बिना कसैले अजीब थियो भनेर एकदमै शंकास्पद र सजिलै देखिने गर्छ भने. म प्रयास गर्दैछु बिन्दु म निष्पक्ष रहन मेरो सबैभन्दा गर्न प्रयास गर्ने छ, ताकि म माथि एक कार खींच छैन छु किनभने यो देखिन्छ “sketchy” वा व्यक्ति ड्राइभिङ किनभने यो देखिन्छ “एक गर्दनमार जस्तै”. यो कुरा हो, म मेरो काम गरिरहेको छु कसरी म राम्रो बारेमा खुसी छु, र परमेश्वरको प्रशंसा. म कहाँ हुनत निराश छु म अनुमान, म यो ठूलो मुद्दा मा त सानो महसुस छ. अधिक म बहस, अधिक म मेरो कालो र अरब मित्रहरुलाई सुने मलाई आदि sketchy खोजको आफ्नो कथा र सम्भावित कारण बताउन. अधिक म कुनै विचार कसरी यो समस्या मदत थियो बुझे.
मलाई थाहा म प्रार्थना गर्न आवश्यक, र म भएको हुनाले म राम्रो पुलिस त्यहाँ आफ्नो सर्वश्रेष्ठ प्रयास गर्ने र सबै सही कारण यो काम प्रेम गर्ने धेरै थाहा… तर म मलाई मानव गर्व गर्दा यो समस्या अमेरिका मार्फत जारी यो समस्या समाधान गर्न र निष्क्रिय खडा गर्न सक्षम हुन चाहनुहुन्छ अनुमान. यो सिर्फ हार्ड मानिसको… त्यसैले, म यो टिप्पणी उद्देश्य भन्न छ अनुमान, म आफ्नो पीडा कली महसुस. म sketchy प्रहरी काम गर्न subjected गरिएको छ जो मेरो साथी को धेरै को दुखाइ महसुस. र यो के मतलब लागि / अप बनाउँछ, म तपाईं हामीलाई एक द्वारा मार्फत राख्नु गरिएको छ कुनै पनि असहज स्थिति को लागि माफी माग्न चाहन्छु. र यो टिप्पणी को दोस्रो भाग सिर्फ एक प्रार्थना अनुरोध छ, मेरो टाउको राख्न र मेरो समुदाय राम्रो गर्न कुनै तरिका फेला पार्न, सबैका लागि काम मेरो ठाउँ. तपाईं समस्या देख्नुहुन्छ जब यो निराशा हुन्छ र तपाईंले यसलाई कसरी मिलाउने थाहा छैन.
द्रुत अन्तिम बिन्दु, म गीत मानिस प्रेम. यसलाई जहाँ तपाईं असल पुलिस बाहिर एक कराउनु दिनुभयो चौथो पदमा आँसु मलाई ल्याए. कि मानिस को लागि धन्यवाद!
धेरै माया र आदर,
Danielle • डिसेम्बर 4, 2014 मा 11:59 छु • जवाफ
यो मेरो हृदय छोयो. इमानदार तपाईं पारदर्शी लागि धन्यवाद. म सुरक्षा र सेवा गर्न लिया शपथ आदर गर्ने छनौट गर्ने मायालु मानिस परमेश्वरको भय राख्ने हुनुको लागि सलाम. म तपाईं तिनीहरूलाई सुसमाचार साझेदारी गर्न मौका हुन सक्छ कि आफ्नो पेशा र आफ्नो नम्रता आदर र अनुग्रह अन्य प्रहरी अधिकारीहरू मा चमक थियो कि एक हल्का पोस्ट हुनेछ प्रार्थना. तपाईं थप परिवर्तन चेला र नेतृत्व मार्फत कि विजयी हुनेछ. परमेश्वरले यस सत्य आफ्नो जीवन को सबै दिन साझेदारी गर्न आफ्नो हात खुट्टा र मुख आशीर्वाद सक्छ. अब तपाईं आफ्नो मिशन थाहा! #telltheworld #lovehard #overcome
Aj_cthingswell_FbAjHowardbentleyCaldwell • अप्रिल 8, 2015 मा 10:41 छु • जवाफ
वाह! यो आत्म छ गीत गहिरो र धेरै हार्दिक थियो तर टिप्पणी साँच्चै ठाउँ मारा. केही हप्ता पछाडि म मेरो काम हामीलाई ग्याँस प्राप्त गर्न आवश्यक छ कि एक राज्य पम्प मा ग्याँस प्राप्त भएको थियो र म sheriffs साथै ग्याँस प्राप्त देख्न र प्रत्येक एक म हुनेछ ठेगाना subconsciously काल अप बाहिर व्यक्ति को छैन डर हुनत म किनभने देख्न तिनीहरूलाई को डराएको हुन तिनीहरूलाई थाहा थिएन तर यो केवल यस असहज महसूस हुन थियो, तिनीहरूलाई मेरो दृश्य म साँच्चै गीत मा नायक र यात्रा lees जस्तै अनुभव र विषयहरू सबै तिनीहरूलाई देख्यो एक प्रहरी अधिकारी हुन 90 का मा बढ्दै किनभने भइरहेको नायक सधैंभरि परिवर्तन गरिएका छन्. एक नकारात्मक तरिकामा हुनत किनभने म बस तिनीहरूलाई तिनीहरूले साँच्चै दिन को अन्त मा छन् के रूपमा हेर्नुहोस्।. एक मानव।. र म त्यो तपाईं सामान्यतया हेर्न छैन किनभने मलाई त्यो रूपमा हेर्न अनुमति परमेश्वरको धन्यवाद (राम्रो म कहिल्यै lol यसलाई हेर्न छैन) हास्य किताबहरु मा नागरिकहरु नायक लागि प्रार्थना. र ती घटना बाहिर birthed थियो के… किनभने एक hoody संग एक राज्य ग्याँस पंप मा खराब दिन वा मेरो व्यक्ति को आफ्नो धारणा को पनि डर भइरहेको मेरो तनाव र तिनीहरूलाई डरले बीचमा (यो चिसो बाहिर छ तापनि), एक चिह्न हटाइयो सबै सेतो वैन मा ग्याँस राख्दै (म काम गर्न बौद्धिक विकलांग व्यक्तिहरूलाई लागि यातायात प्रदान भनेर थाह पाउँदा छैन),तिनीहरूले मलाई एक व्यक्ति झूटो आरोप र / वा आफ्नो जीवन र प्रतिष्ठा लागि अवधि बाहिर डर बाहिर कार्य गर्न तिनीहरूलाई प्रकुपित हुनुको डर हुन सक्छ किनभने तिनीहरूलाई लागि खराब महसुस यो दया आयो. यसको केवल एक jacked अप अवस्था फाटो र त्यो त जब के स्थान लिन सक्छ थाह किनभने यति ख्रीष्टको शरीर एक अनुसार, मा छैन हामीलाई अलग राख्न शत्रु को एक चाल स्पष्ट छ कि. तर सानो उहाँले गर्छ जब त्यो सिर्जना भन्ने थाहा 23 वर्ष थप केही वा यी अन्तिम र दुष्ट दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको भन्दा कम केही अपनाउँछन् गर्ने पुरानो पुरुष प्रार्थना योद्धाहरू. नील मलाई आशा छ र तपाईँले नम्र रहन कि प्रार्थना र प्रत्येक स्थिति तपाईं वातावरण theMmost उच्च परमेश्वरको बच्चाको रूपमा आफ्नो पक्षमा जान्छ कुनै कुरा प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने. धन्य हुनु!
केविन • डिसेम्बर 3, 2014 मा 11:59 बजे • जवाफ
हे यात्रा।. यो तपाईं परमेश्वरको कारण भएको को थियो तपाईंले आफ्नो हात पायो. म सबै कुरा एउटा कारण लागि हुन्छ कि belive. यो थप मानिसहरूलाई जडान गर्न त तपाईं कहिल्यै कल्पना हुनेछ तपाईँको अवसर छ. मानिसहरू बस तिनीहरूले मान्छे साथ आउन आवश्यक जवाफ देख र संगीत मार्फत सुसमाचार spred छन्, बाइबल अध्ययन वा तल बसिरहेका र कफी भन्दा मनमा एक मन भएको. म भन्न खोज्नुभएको छु के एन्डी Mineo राख्नु रूपमा अनुमान “हामी एक गाढा संसारमा livin तिनीहरूले थाहा केहिले हामी कसरी यो उज्यालो हुन त्यहाँ गरौं देखाउन दिनु प्रदर्शनमा आफ्नो महिमा राख्न भने”.
यी • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:03 छु • जवाफ
तपाईंको सबै संगीत को लागि धन्यवाद. तपाईं र सारा 116 क्लिक. भगवान साँच्चै मलाई र कान्छो पुस्ता बाँकी कुरा गर्न तिमी मान्छे प्रयोग, तर पुस्तामा आउन! म एकदिन आशा, भगवान इच्छुक, तपाईं आफ्नो साक्षात्कार को एक वर्णन ती कुनै न कुनै छिमेक मा तपाईं बाहिर मदत गर्न बाहिर आउन.
QUENTIN हल्याण्ड • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:04 छु • जवाफ
शक्तिशाली गीत…. मेरो हृदय अहिले पिता हुनुको भारी छ3युवा अफ्रिकी अमेरिकी पुरुषहरु. तिनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रपति बन्न मौका छ तर पनि महसुस तिनीहरूले केही परिस्थितिमा यसलाई बनाउन बाँच्न सक्छ भनेर…
यो चोट ठीक छ. विश्व माटो भरिएको छ….
पनि (आत्मा) र पुत्र (येशूले) बढ्न सुन्दर कुरा अनुमति दिन सक्छ….. मेरो आशा उहाँमा छ
Tjay • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:14 छु • जवाफ
हात तल ठाउँ मै. यो ट्रयाक स्पष्ट भर बिन्दु हुन्छ. यस अवस्थामा undeniably दुःखी छन् र मेरो मुटु भारी छ. म सेतो पुरुष हुँ तर रंग को मान्छे आसपास वृद्धि. पनि नजिक परिवार रंग को छ. म प्रोभिडेन्स मा मुश्किल छिमेक को एक मा वृद्धि, आरआई गरेको कम दक्षिण पक्ष र देश भर भइरहेको र अन्याय को राम्रो सचेत छु. गर्न “सुरक्षा र सेवा” हरेक अफिसरहरू कि हरियो आपत्ति हुनुपर्छ, नीलो, कालो वा सेतो. मान्छे परिवर्तन छैन भने इतिहास मात्र नै दोहोरिदैन… म यो अन्त गर्न आउँछ आशा र प्रक्रियामा चोट गरिएका यी सबै मानिसहरू शान्ति पाउन सक्नुहुन्छ. #AllLivesMatter
केन • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:25 छु • जवाफ
यू मेरो ब्रो संग सहन, तपाईंको पोस्ट readin जूस मलाई आँसु मा थियो. अकादमी 25 वर्ष पुरानो मेक्सिकन र मानिस मेरो हृदय यति भनेर माइक खैरो कल देखि burddened गरिएको, मेरो Popz यो जस्तै COP देखेर सामान मलाई चिन्ता बनाउँछ तर मलाई थाहा जसले हामीलाई कवर. म cryd ब्रो जूस र प्रार्थना आज त्यसपछि यो देखेर हुन एक laborer बाली काट्ने लागि खडा गर्न. यो हाम्रो पुस्ता ब्रो letz उहाँमा थिचेर राख्न हो! यू bro मन
meldd • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:33 छु • जवाफ
हुर्किरहेका, म केहि छ कि मलाई नस्लवाद अझै पनि वरिपरि थियो लाग्छ बनाउने हुन देखे कहिल्यै. म सबै मानिसहरूलाई प्रेम र मेरो सम्पूर्ण शहर नै महसुस (या त मलाई लाग्यो).
अब, म यी सबै विपत्ति आइलाग्यो हेर्न&रिस को outbursts. मलाई वरिपरि मानिसहरू अब पहिचान छैन. कसरी यो सबै पारित गर्न आयो? म हामी यो पछिल्लो थिए लाग्यो।.
म गलत थिए.
lena • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:36 छु • जवाफ
शक्तिशाली: lyrically र musically. म लेबल संग छैन, हामी सबै पापी छन् र उहाँको महिमारहित. तर म सेतो केटी हुँ. धेरै म सोच्न रंग छैन चाहनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण-यो देश र संसारमा ठाउँमा छ. पापीको रूपमा: यो coulda मलाई भएको. एक गरिब सेतो केटी रूपमा: हुनसक्छ, तर सायद. र क्रूर र दुःखी छ.
म यो गीत कसरी समाप्त प्रेम: मेरो आशा उहाँमा छ. शान्ति र स्वीकृति आउँदा हाम्रो आशा, विश्वास, र प्रेम उहाँमा छ.
Miguelperez • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:55 छु • जवाफ
यो यस्तो लेखे यस्तो सुन्दर कुरा र यति सत्यवादी छ र म यी विवादहरू सन्दर्भमा आफ्नो हृदयमा के वजन थियो प्रतिक्रिया कृतज्ञ छु र यो एशिया | चारै ओर कि हिंसा को मुद्दाहरू मेरो आँखा थप खोलियो गर्नुपर्छ. जो बेवास्ता वा महत्त्वपूर्ण समाचार रूपमा अवहेलना गर्ने अभिप्राय. तपाईं ली यात्रा धन्यवाद.
Damian • डिसेम्बर 4, 2014 मा 1:01 छु • जवाफ
म्याक • डिसेम्बर 4, 2014 मा 2:13 छु • जवाफ
मानिस, म आफ्नो शब्द राती पढ्न. तिनीहरूले मलाई गाह्रो मारा. यो देशमा यस भीषण चक्र…jaded पुलिस तिनीहरूले प्रोफाइल फिट किनभने जवान कालो मानिसहरू लक्षित…युवा काले पुरुषहरु लक्षित र खडा र आफूलाई अप बोल्ने भइरहेको थकित प्राप्त…
तपाईं देख्न, हाम्रो पतित प्रकृति यो हाम्रो अनुभव compartmentalize गर्न झुकाव ल्याउँछ. कसैले रूपमा बच्चाको रूपमा कुकुर द्वारा bitten, सामान्यतया सबै canines गर्न अनिच्छा संग बढ्छ…या त डर वा घृणा रूपमा. त्यो हटाउन त गाह्रो हुन सक्छ, किनभने हामी ती भावना अनुमति…कहिलेकाहीं तिनीहरूलाई बढावा र पैटी rationalizations तिनीहरूलाई खुवाउन.
Tripp, म सेतो छु. मेरो 4th ग्रेड वर्ष सम्म, म दक्षिणी इलिनोइस मा एक predominantly कालो छिमेकी सेता बच्चाहरु को एक सानो मुट्ठी रूपमा अप भयो. मेरा सबै साथीहरू कालो थिए. त्यसपछि, हामी टेनेसी सारियो. म प्रमुख कार्यालय गर्न ड्रप गर्ने कसैसित झगडा लागि भनेर वर्ष तीन पटक पठाइएको भयो “एन शब्द”…THE 4th ग्रेड मा…बच्चाहरु पहिले नै वर्गीकरण र अरूलाई तल हेर्न सिकाइएको थियो….किनभने छाला रंग को. त्यो शब्द मलाई आक्रोशित…बिन्दु म यो भन्दै लागि मुखमा तपाईं मुक्का थियो. यो अझै पनि मलाई infuriates…म अहिले पंच सट्टा प्रार्थना.
मानिस, म हरेक रंग र छाला को छाया को नातेदार छ….र, तपाईंलाई थाहा के? म यो गर्व महसुस. मेरो परिवार रूख ठ्याक्कै अमेरिका ठूलो बनाउँछ छ. मेरो परिवार अमेरिकी पिघलने पट छ. मेरो परिवार अचम्मको छ र म तिनीहरूलाई सबै प्रेम.
एक जोडी वर्ष पहिले, म एक फोहर छोडपत्र मार्फत र मेरो आफ्नै मूर्खता गए, बारहरू पछि केही समय खर्च समाप्त र अब एक Felony रेकर्ड छ. म पहिलो हात खराब पुलिस को प्रभाव देखेका छौँ. अब, कुनै पनि समयमा एक गस्ती कार मलाई पछि हुन्छ वा COP मलाई विगतमा हिँड्छ, म सोच्दै छु, “के तिनीहरू केहिले यो समय के? केहिले तिनीहरूलाई मलाई को सामना गर्नु एउटा कारण दिन बाहिर निकाल्न तिनीहरूले के हुन्. तपाईं सिस्टम हुनुहुन्छ एक पटक तिनीहरूले थाहा किनभने…तपाईं जीवन को लागि एक आपराधिक हुनुहुन्छ।” त्यसपछि म साँघुरो दिमाग र कट्टर भएकोमा पश्चात्ताप छ. उनीहरू भन्छन् एउटा खराब स्याउ को गुच्छा अवशेष, तर परमेश्वरले हामीलाई स्याउ को छविमा भएको छैन…उहाँले उहाँको छवि हामीलाई गरे. त्यो कुरा गणना गर्न पायो गर्नुपर्छ, ठिक?
इमान्दारी पुर्वक, ब्रो…तपाईंको शब्दहरू पढेर र तिनीहरूलाई मनन र मेरो जीवन मा फिर्ता देख पछि….मलाई भएको छु सक्छ, धेरै.
म हल्कासित भन्न छैन वा तपाईंको शब्दहरू गुरुत्वाकर्षण टाढा लिन. यो सिर्फ विपरीत छ. त्यहाँ समस्या छ, तर कालो र सेतो मुद्दा छैन कालो छ & सेतो मुद्दा. हरेक व्यक्ति फरक छ र हामी बस्ने यो पतित संसारको आफ्नै धारणा सोचेनन् गर्न आफ्नै जीवन अनुभव मा ड्र. समस्या पाप हो. हामी यो सबै दोषी छन्. म त्यहाँ मानिसहरू बाहिर त्यहाँ अहिले उहाँको वचन आज्ञाकारी छन् भन्ने हो परमेश्वरलाई धन्यवाद र निको मदत गर्न खोज्नुभएको. म मेरो प्रार्थना राती तपाईं र अरू थुप्रैबाट भयो. धेरै माया.
म्याक • डिसेम्बर 4, 2014 मा 2:17 छु • जवाफ
“तर माथिबाट बुद्धि पहिलो शुद्ध छ, त्यसपछि शान्तिप्रिय, कोमल, तर्क गर्न खुला, कृपा र राम्रो फल को पूर्ण, निष्पक्ष र निष्कपट. र धार्मिकताको एक बाली शान्ति बनाउन गर्नेहरूलाई द्वारा शान्ति मा छरिएको छ।”
जेमी • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:18 छु • जवाफ
म यसलाई diggin छु. पूर्ण तपाईं Tripp देखि आ हुनुहुन्छ जहाँ हेर्न.
Stephlandry09 • डिसेम्बर 4, 2014 मा 6:42 छु • जवाफ
तापनि म सबै देखि म एक जवान सेतो महिला हुँ यो सम्बन्धित सक्दैन, यो मेरो आँखा गर्न आँसु ल्याए. मेरो हृदय बाहिर सारा Ferguson परीक्षण मार्फत भारी भएको छ. यो कुरा र साझेदारी आफ्नो अनुभव को लागि धन्यवाद.
AaronCrim • डिसेम्बर 4, 2014 मा 7:23 छु • जवाफ
तपाईं यात्रा धन्यवाद, म यो उपयोगी हुन फेला. म WV देखि सेतो मसीही हुँ, म यी घटनाहरूको बनाउन के भन्दा संघर्ष गर्नुभएको. साँच्चै सोच्न के निश्चित, (तिनीहरूले साँच्चै सिधै मलाई प्रभावित गरेको छैन) म तर यति मेरा भाइहरू को धेरै हेर्न heartbroken गरिएको र बहिनीहरू चोट छ र विभाजित. मेरो countrymen धेरै चोट हेर्न Heartbroken. फेरि यो THO धन्यवाद मलाई अलि बढी बुझ्न मदत गरेको छ र मलाई एकता र शान्ति को लागि राम्रो प्रार्थना गर्न कसरी थाहा मदत गर्नेछ. परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ
Jeanine pinkney • डिसेम्बर 4, 2014 मा 7:29 छु • जवाफ
तपाईं यो गीत लागि धेरै धेरै धन्यवाद. मेरो भाइ मलाई यो आशिष् लागि लिंक र IM साँच्चै कृतज्ञ बिहान पठाइएको. म एक सिकार छु गर्न, म मेरो छोरा Rashad Pinkney डिसेम्बर गुमाए 21,2013. बेहोस बन्दूक हिंसा गर्न. यसलाई हामी हाम्रो आफ्नै जीवन कसरी लिन्छ लाजमर्दो छ. कालो अपराध मा कालो हाम्रो समुदायमा जीवनको एक सामान्य तरिका हो. त्यसैले हाम्रो जवान मानिसहरूको धेरै जीवन लागि समय मूल्य छ. मेरो आनन्द लिइएको छ किनभने म सधैं चोट, कुनै उत्तरदायित्व किनभने म चोट, किनभने मैले बुझेको छैन म चोट, म सिर्फ चोट!!! तर म अझै पनि लागि बाँच्न र मेरा परमेश्वर प्रेम!!!
TerryMiller • डिसेम्बर 4, 2014 मा 7:40 छु • जवाफ
तिमीलाई थाहा छ, यात्रा, म एउटा तरिका वा मुद्दा सम्पूर्ण गहिराई बारेमा अन्य केहि छैन भन्न सक्नुहुन्छ. म सेतो मानिस हुँ. कालो मानिस गर्छ रूपमा म नस्लवाद देख्नुभएन. म यसलाई माध्यम बस्ने छैन. तर, के म थाह छ, यो गीत एक हिट छ. ठूलो हिट हुनुको सक्षम, मलाई लाग्छ, उचित च्यानल मार्फत प्रचार यदि. जे भए पनि, ya'll संग विन्दुमा राम्रो देखिन्छ, त्यसैले केवल प्रशंसा लिन, साथी. कुनै, मलाई लाग्छ छैन कसैलाई पीडा मा क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ. तर, तपाईं यो तपाईं ज्ञात र देखेका छौँ के विश्वास छ भने, त्यसपछि यो साथ चलाउन. यो तपाईं यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ वास्तविक जीवन सामान छ. कलाकारहरूको हासिल तपाईं सबै एक सामूहिक एल्बम वा संकलनको जारी गर्नुपर्छ. शायद यो पनि एक e.p. सबै negativity बिना productively जागरूकता ल्याउन सांसारिक कलाकारहरूको तालिका ल्याउन सक्छ. जे भए पनि, राम्रो काम यहाँ!
हेनरी Strozier • डिसेम्बर 4, 2014 मा 8:00 छु • जवाफ
राम्रो गीत! हामीलाई आफ्नो हृदय साझेदारी को लागि धन्यवाद! यो त दुःखी छ! म सिकार को परिवार को लागि प्रार्थना!
लुइस • डिसेम्बर 4, 2014 मा 8:04 छु • जवाफ
धन्यवाद यात्रा, यो मेरो प्राण लागि राम्रो थियो.
Alasdair • डिसेम्बर 4, 2014 मा 8:15 छु • जवाफ
को drivel यात्रा Farrakhan लागि धन्यवाद.
Jacqueline lugo • डिसेम्बर 4, 2014 मा 8:42 छु • जवाफ
मेरो हृदय यस संसारको तरिकाहरू खण्डन. धेरै अन्याय! मेरो हृदय भारी छ. म दिन प्रतीक्षा छु प्रभु आफ्ना मानिसहरूलाई दावी आउँदा. जब कुनै थप पीडा हुनेछ. कुनै हत्या. कुनै थप आँसु. मेरो हृदय यस्ता दुःखद र हिंसात्मक तरिकामा प्रेम एक गुमाएको छ कि प्रत्येक परिवारलाई बाहिर जान्छ. तपाईं आफ्नो शब्द र आफ्नो हृदय लागि यात्रा धन्यवाद
Alasdair • डिसेम्बर 4, 2014 मा 8:43 छु • जवाफ
गोली साल्ट लेक शहर डिललोन टेलर. कुनै हतियार. कुनै अपराध. तपाईं नजान्ने दौड दलाल.
मेलोडी • डिसेम्बर 4, 2014 मा 8:43 छु • जवाफ
यस बारे लेख्न समय को लागि धन्यवाद. यसलाई म अक्सर छैन सुन्न गर्छन् र साँच्चै हालै सम्म विचार थियो छैन एक दृष्टिकोण छ.
माइक • डिसेम्बर 4, 2014 मा 9:35 छु • जवाफ
बिन्दु @alasdair उहाँले गरिरहेको छ, जो तपाईंले गीत उहाँले भन्नुभयो बस जस्तै बन्द झटका गर्न खोज्नु, छ सफेद प्रहरी र के भनेर कालो मानिसहरू हुन् भनेर मान्य छैन को अनुमानको बनाउन. सेतो हुनुको र पूर्वाग्रह भन्ने मेरो परिवार को एक पक्ष संग जीवित, र भन्ने आंशिक अफ्रिकी अमेरिकी अन्य पक्ष, म तपाईंलाई बताउन सक्छ यात्रा भने साँचो हो कि. डिललोन टेलर को मामला मा, म स्वीकार गर्न जो म यो निरन्तर जस्तै केहि को सुने गर्नुभएको केही समय मध्ये एक छ, यो नै कुरा हुन सक्छ. यात्रा त्यहाँ अझै पनि यो देशमा नस्लवाद र पूर्वाग्रह समस्या भन्ने बताउँदै छ, र यो पाप कारण हो. त्यो समस्या केवल एउटा तरिका जाने छैन, तर यसको आफ्नै मा यो गीत अहिले हात मा सबै भन्दा अहम मुद्दा कुरा छ, जो तिनीहरूले एक स्टेरियोप्रकार फिट किनभने बेमनासिब व्यवहार गर्ने जवान कालो मानिसहरूको महामारी छ. तपाईं के चाहनुहुन्छ विश्वास हुनेछ, तर हामी मुद्दा हेर्न, र हामी यसलाई विरुद्ध खडा हुनेछ, र जो चोट ती संग चोट.
Henock Aristide • डिसेम्बर 4, 2014 मा 9:49 छु • जवाफ
अत्यन्तै मा जा के दुःखी. राम्रो ट्रयाक Tripp.
@TheRealChrisZ • डिसेम्बर 4, 2014 मा 9:55 छु • जवाफ
येशूले मात्र ल्याउन सक्ने निको र मेलमिलाप लागि प्रार्थना!
लीन • डिसेम्बर 4, 2014 मा 10:30 छु • जवाफ
मलाई लाग्छ यसको असुरक्षित र सेतो महिला र कालो मानिस खतरनाक. म सजीव छैन तर मलाई विरुद्ध commited थिए कि अपराधको अधिकांश, मेरो परिवार, र मेरो साथी, कालो पुरुषहरु द्वारा थिए. म यो सत्य wasnt इच्छा तर यो छ.
Thebiggerpicture • डिसेम्बर 4, 2014 मा 10:49 छु • जवाफ
किन उहाँले गिरफ्तारी प्रतिरोध थियो? उहाँले मृत्यु गर्नुपर्छ, तर उहाँले त अधिकारीहरू प्रतिरोध गरिएको छ गर्नुपर्छ. कुनै, तपाईं व्यवस्था पालन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईं भएको सक्छ. के अधिकारीहरू अलग गर्नुपर्छ? मान्छे व्यवस्था तोड्न गरौं, गिरफ्तारी प्रतिरोध र सिर्फ आफ्नो दिन बारेमा जाने? जब यो अन्त गर्छ? तपाईं हाल तथ्याङ्क देखेको छु? तीन पटक थप WHITES अश्वेतहरुको भन्दा पुलिस अधिकारीहरु मारे हुनुहुन्छ. तिन चोटी. त्यस डुब्नु गरौं. म अश्वेतहरुको लक्षित भइरहेका छन् लाग्छ छैन. म rioting लाग्छ, लूटने र कुराहरू तल जल सेतो बच्चाहरु सजीव बनाउन जाँदैछन् (BC तिनीहरूले टिभीमा यो सबै हेर्दै हुनुहुन्छ र सबै अश्वेतहरुको त्यसो लाग्छ जाँदैछन्) र म कालो छोराछोरीलाई यो जस्तो कार्य गर्न ठीक भन्ने लाग्छ जाँदैछन् लाग्छ. प्रहरी एउटा कारण दिन छैन “प्रोफाइल।” कालो छिमेक सबै शहर को सबै भन्दा खतरनाक भागहरु बनाउन रोक्न. सबैलाई (सबै रंग) तिनीहरूले व्यवस्था माथि छन् र तिनीहरूले तोड्न भने केही हुनेछ सोच रोक्न आवश्यक. (राम्रो गीत, हुनत… तपाईं कौशल छ)
माइक • डिसेम्बर 5, 2014 मा 9:08 छु • जवाफ
कृपया खातामा लिन यस देशमा बस्ने अफ्रिकी वंश को हुन् धेरै Caucasians रूपमा 3x बढी छन् कि.
यो प्रत्येक जाति को कति आधारित हत्याओं को अनुपात को एक टूटने दिन्छ यहाँ बाँच्न.
MichellH • डिसेम्बर 4, 2014 मा 10:53 छु • जवाफ
यात्रा, यो मुद्दा समाधान गर्न बाटो छ, कुरा, भावना व्यक्त, माथि खोल्ने र प्रार्थना! घृणा छैन…धन्यवाद!
म एक मध्यम वृद्ध सेतो महिला हुँ. म एक धेरै फरक दृष्टिकोण छ. म पनि एक जवान सेतो महिला रूपमा परेशान थियो (स्थिर यौन उत्पीडन) , र अन्य तरिकामा भेदभाव भोगे छ. उदाहरणका लागि लागि जब किनभने म भन्दा योग्य थियो तापनि वजन हुनुको पारित अप भइरहेको. तर, म प्रभावित छ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने म कहिल्यै मलाई तल प्राप्त गरौं, र म वरिपरि छु जवान बच्चाहरु सिकाउन प्रयास के हो. हामी सबै भेदभाव सामना गर्दै, हामी सबै, केही तरिका वा अर्को मा. तर के जवान कालो मानिसहरू सामना आफ्नो जीवन endangers, म धेरै मार्फत प्राप्त गर्न खोज्नुभएको विन्दु हो लाग्छ.
Twiceborn • डिसेम्बर 4, 2014 मा 10:54 छु • जवाफ
म आफ्नो Tweet देखे अघि मिनेट म प्लान पोस्ट
“कहिलेकाहीं म मेरो TL स्क्रोल & साँच्चै प्रार्थना गर्न.
म unchurched दोष छैन तर केही ख्रीष्टियानहरूलाई Inconsiderately Nonempathic #ButGod छन्”
तपाईंले भाइ यात्रा हुनुहुन्छ।. यसको दुःखी र म दुःखित छु।.
म बहस वा तर्क गर्न चाहनुहुन्छ Dont।. म सिर्फ शान्ति र न्याय मानिसको लागि प्रार्थना छु।. #CrazyWorld
JR • डिसेम्बर 4, 2014 मा 11:04 छु • जवाफ
यात्रा, म आफ्नो व्यक्तिगत दुखाइ को लागि माफ पनि सम्पूर्ण अफ्रिकी अमेरिकन / काले समुदाय को घिनौना नतिजा हिजो प्रकाश मा महसुस हुनुपर्छ भन्ने ठूलो पीडा लागि छु.
सेतो मसीही रूपमा, म पनि यस्ता आफूलाई रूपमा अल्पसंख्यकों लागि न्याय गर्न कलमा तपाईँ सामेल गर्न चाहनुहुन्छ. र म पनि म एरिक गार्नर को भिडियो महिना पहिले हत्या भइरहेको हेर्नुभयो रूपमा भन्न हुनेछ, बस ती केही मिनेट लागि, म आफ्नो जूता मा आफैलाई राख्न र अन्याय महसुस गर्न सक्छ.
वृद्धि धार्मिक वैमनस्यता को क्षेत्रमा मेहनत गरिन् ख्रीष्टियान रूपमा, म हामी सबै बुझ्न को लागि यो महत्त्वपूर्ण लाग्छ कि हाम्रो समूह पनि कानूनको पालन नगर्ने प्रहरी अधिकारीहरू लागि लक्षित हुन्छ भने, हामी यस्तै भूमिका मा आफूलाई पाउनुहुनेछ, धेरै. जुन हामीले न्याय लागि प्रेस गर्नै पर्ने किन बस अर्को कारण हो.
सबै समान र उचित उपचारको लागि हामी प्रेस पर्छ – मानव मर्यादा लागि. हामी यथास्थिति स्वीकार गर्नुपर्छ. अफ्रिकी अमेरिकन / काले समुदायमा भाइबहिनीको लागि पहिलो र मुख्य, तर पनि सारा हाम्रो समाज लागि. हामी tyranny एक देशमा बाँच्न सक्दैन. हामी सबै एरिक गार्नर गरेको हत्यारो को शोकमा थुप्रै पाठ सिक्न सक्छ. धन्यवाद.
बेन • डिसेम्बर 4, 2014 मा 11:14 छु • जवाफ
म यो गीत बारे भन्दा प्रेम भन्ने कुरा यो मात्र शब्द गरे तरिकामा मुद्दा महसुस मलाई जानुहुन्न छ. इमानदार ठूलो मुक्तिदाता को छुटकारा रूपमा साथै मेरो मनमा पाप पर्दाफास लागि धेरै धन्यवाद.
मेरो मुख भन्दा मेरो हात संग प्रार्थना.
पामेला • डिसेम्बर 4, 2014 मा 11:21 छु • जवाफ
तपाईंको शब्दहरू लागि धन्यवाद, यात्रा. म एक मानिस रूपमा पराउँछु, एक नागरिक, र विश्वास. तपाईंको शब्द सधैं मेरो प्राण छोयो र मलाई लाग्छ गरेका छन्. हामी सबै प्रार्थना. धेरै माया.
RyanH • डिसेम्बर 4, 2014 मा 11:35 छु • जवाफ
स्टीरियोटाइप साँचो हो? एक स्टेरियोप्रकार त्यहाँ हुनेछ भने त्यहाँ stereotyping समर्थन गर्न केही थियो? हामी सबै भन्दा र्याप गीतहरू को गीत यी दिन थाहा. नरक देखि यसको सीधा, र नरक जस्तै बाँच्न सुन्नेहरूलाई गराउँछ. तपाईं मान्छे COP हत्या बारेमा गीतहरू सुनेर एक संस्कृति हेर्न भने, दबाइ लेनदेन, हत्या, चोरी, हिंसात्मक हुनुको, अनादर गर्ने रहेको, तिनीहरूले सुनिरहेका छन् ती अपराधको प्रतिबद्ध गर्न एक उच्च झुकाव हुन सक्छ भनेर बुझ्न यसको सजिलो. त्यहाँ यस्तो दावी समर्थन तथ्याङ्क प्रमाण छ? हो. सबैलाई हरेक शहर मा यस शैतानी र्याप संस्कृतिको lewd व्यवहार साक्षी सक्नुहुन्छ? हो. यो संस्कृति कालो मानिसहरूको बहुमत छ? हो. स्टीरियोटाइप कारण भइ…तिनीहरूले मात्र कालो छन्? कुनै, तर हरेक छाला रंग, तर predominately कालो. त्यसैले यसको एक सांस्कृतिक मुद्दा यहाँ र एक जाति मुद्दा, र यो सिर्फ त्यसैले हामी कुरा गर्दै संस्कृति prominently कालो छ कि हुन्छ. के तपाईं साँच्चै आशा मान्छे स्टेरियोप्रकार छैन के, जब कुरा को वास्तविकता छ कि अवस्थामा धेरै मा (कुनै सबै) यसको सही? अघि हप्ता आफ्नो सर्वश्रेष्ठ कली हत्या गर्ने नै मान्छे जस्तो देखिन्छ के देख्नुहुन्छ जो अफगानिस्तान मा समुद्री गर्न भनी. तपाईं stereotyping रोक्न उसलाई भन. यसको छैन नस्लवाद, हिप-हप र मिडिया मार्फत अश्वेतहरुको यस पुस्ता मा तबाही क्षति भएको छ जसले हाम्रो परमेश्वरको यसको शत्रु. पछाडि सन्तहरू लड्नुहोस्.
Thebiggerpicture • डिसेम्बर 4, 2014 मा 1:01 बजे • जवाफ
त्यो के म पनि यसो राखन छ! हुन पहिलो स्थानमा स्टेरियो-प्रकार वहाँ नदेऊ. तिनीहरूले एउटा कारण त्यहाँ हुनुहुन्छ!
RyanH • डिसेम्बर 4, 2014 मा 5:45 बजे • जवाफ
हामी एक समस्या यहाँ छ भनेर स्वीकार गर्न आवश्यक. हामी यो हिप-हप संस्कृति स्वीकार गर्न आवश्यक (जब म भन्न, म अर्थ खराब जीवित बारेमा सबै छ कि सांसारिक र्याप) हाम्रो समुदाय तहसनहस भएको छ. हामी blaming रोक्न आवश्यक “नस्लवाद” यस्ता दुःखद घटनाहरु को कारण रूपमा. सत्य काली समुदाय को एक ठूलो भाग द्वारा संगीत नकारात्मक प्रभावित भएको छ कि छैन. यसको मात्र कालो समुदाय, यसको सारा संसार, तर यी rappers कारणले भन्दा काले हो, अश्वेतहरुको सजिलै तिनीहरूलाई आफूलाई पहिचान.
मसीहीहरूको हैसियतमा हामी वरिपरिको विश्व प्रभावित व्यक्तिहरूलाई हुनु आवश्यक, संसारको निम्ति. विश्व हामीलाई महिमा आशा हेर्न पर्छ. यो हामी दुष्ट एक बह यो संसारमा फरक गर्नेछ मात्र तरिका हो.
तपाईं साजसज्जा साँचो जीवन जान्छ तरिकामा कालो समुदाय र धेरै अन्य प्रभावित लागि ली यात्रा. हामी कहिल्यै आफ्नो खातिर हाम्रो जीवन पल्टिने हामीलाई करमा पार्दछ कि विश्व लागि यो प्रेम गुमाउन सक्छ.
बस अर्को सफेद केटी • डिसेम्बर 4, 2014 मा 11:47 छु • जवाफ
सुन्दर भावना, सुन्दर…मलाई यो मन पर्छ! यसलाई प्रचार र बोल्न स्वतन्त्रता र यस्तो सम्झना, आफ्नो मुटुको धड्कनहरू प्रेम, सबै प्रेम 116 संगीत क्लिक, ya'll लागि दुखाइ महसुस, Yep म के. तपाईं जस्तै जीवन कहिल्यै अनुभव, गरिबी मा रहेको हाँ, मसीही हाँ रूपमा खेदो, एक धनी स्कूलमा अलग Yea, सबै कालो छिमेकी मा एक सफेद रूपमा आक्रमण n एक लोड बन्दूक संग robbed Yea, अश्वेतहरुको द्वारा शहर बसें मा आक्रमण Yea, यो आक्रमण बाट PTSD अनुभव Yea, रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था मेरो बाल्यकाल लिए, दुरुपयोग मेरो आमाबाबुले मेरो निर्दोष र लोकप्रिय तान्नु लिए हाम्रो गुणवत्ता समय थियो Yea, मेरो आमा-कल रक्षा 911! आमाहरु नाक भङ्ग, बुबा दमा धारण, पाँच yr पुरानो केटी STOP चिल्ला! रगत भर, जमीन मा धर, म अब एक ठूलो केटी हुँ. मलाई बाहिर झिकेर, हो उहाँले गर्नुभयो! को गोवर र दलदल देखि! सेक्स देखि, लागूपदार्थको, मृत्यु, छलछाम, विफलता, उहाँले मलाई सुरक्षित, राम्रो कुरा को लागि. हामी सबै दुखाइ महसुस, का एक Thang लागि लडने! हामी सबै एक गवाही छ, यो rascism व्यंग्य sexism छ कि(crae),रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था, लत, कष्ट, दर्दनाक विरोधाभास, तर ख्रीष्टमा सत्य र प्रेम भाइ प्रचार! हामी के गर्ने सक्छौं? तपाईं के गर्न! मलाई तपाईं प्रेमले! दुवै तरिका, मसीहीहरूले खडा! प्रभु प्रेम प्रेम प्रेम!
EnlightenedOne • डिसेम्बर 4, 2014 मा 11:50 छु • जवाफ
प्रेम यो हो कसरी वास्तविक
बिल • डिसेम्बर 4, 2014 मा 12:08 बजे • जवाफ
यात्रा भाइ, म एक जोडी सप्ताह पहिले Cedarville तपाईं भेट, र सधैं प्रेम र आफ्नो संगीत बढुवा गरेको छ. प्रचार आफ्नो कुरा ठूलो थियो! तर म तपाईं सिक्का अन्य पक्ष विचार गर्नेछौं आशा. जब तपाईं भन्न कि 'यो coulda तपाईँ'…तपाईं यो मलाई गरिएको छ भनेर नै बाटो मा बुझ्न आवश्यक, र म एउटा पुरानो सेतो मानिस प्रचारक हुँ. ठूलो शहर वा ग्रामीण सहर गल्लीहरूमा तल हिड्ने, हामी सबै पूर्वाग्रह र घृणा सिकार हुन सक्छ…बस किनभने हाम्रो छाला को रंग को…कुनै कुरा हाम्रो वर्ण वा के हामी समयमा गरिरहेका छन्. यो गिरावट र पापको एक गाढा वास्तविकता हो.
तर अर्कोतर्फ….यसलाई 'छैन हुनेछ’ पक्राउ र मृत्यु भएको थियो जो सडकमा 'मा तपाईं गरिएको छ, तपाईं मसीही रूपमा अधिकारी प्रतिक्रिया थियो किनभने, र अभिवादन र मानिस को अधिकारीहरु obeys परमेश्वरको नियुक्त गरेको छ कि, प्रेरित पावलले जस्तै. तपाईंले यी मानिसहरू को प्रत्येक परिस्थिति जाँच्न यदि तपाईं उल्लेख, तिनीहरूले प्रतिरोध गर्न एक विकल्प कि स्पष्ट छ, आज्ञा पालन नगर्ने, लड्न वा तिनीहरूले विश्वासीपूर्वक गरिरहेको संग चार्ज छन् आफ्नो काम गरिरहेको थियो जसले लियो आक्रमण. र अधिकारी गर्दा पूर्वाग्रह दोषी हुन सक्छ, पूर्वाग्रह वा घृणा, पीडित व्यवस्था साथ थियो भने, तिनीहरू अझै पनि जीवित र अदालत तिनीहरूलाई विरुद्ध कुनै पनि अन्याय पछि लाग्न सक्षम हुनेछ. हामी सबै अन्याय विषय हो….र हामी यो प्रतिक्रिया कसरी….अक्सर नतिजा निर्धारण….यी दुःखद अवस्थामा प्रत्येक जस्तै.
यो विचार को लागि धन्यवाद, र कृपया म गलत छ भने मलाई ठीक स्वतन्त्र महसुस, वा मेरो सल्लाह unbiblical वा विपरीत येशू आफैले को शिक्षा छ भने. परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष मेरो भाइ, र गरेको निको लागि मिलेर काम गरौं….विभाजन छैन.
स्टेफनी • डिसेम्बर 4, 2014 मा 1:30 बजे • जवाफ
जीवन त अनमोल छ. हाम्रो समुदाय मा मान्छे को जीवन अन्य जात जस्तै सन्दर्भमा आयोजित छैन कसरी हेर्न मलाई saddens. कुनै एक को हत्या वा मृत्यु डकगरिएको गर्न योग्य. बाँकी गर्ने विचार व्यवहार को यस प्रकार परमेश्वरले अनदेखी गरिनेछ ती तपाईं दुःखको कुरा गलत हो आश्वासन. दायाँ छ के को लागि मानिस खडा हुनेछ भने त्यो सबैभन्दा उच्च गर्न जवाफ हुनेछ. यात्रा ली….तपाईंको पीडा / हाम्रो दुखाइ निस्सन्देह वास्तविक छ. र प्रभु हामीलाई सुन्न र अनुसार प्रतिक्रिया हुनेछ. हामी सिर्फ उहाँलाई दह्रो छ, र उहाँले के भन्छ के आज्ञाकारी हुन. म एक मान्छे हामी बुद्धि मा येशूले नाम सँगै हुनेछ भनेर प्रार्थना, सकारात्मक परिवर्तनका लागि शक्ति र बल.
याकूबले • डिसेम्बर 4, 2014 मा 2:01 बजे • जवाफ
तिमी मलाई एउटा प्रेरणा भएको छु म पहिलो तपाईं सुनेको देखि. र, जबकि म साधारण तपाईंको गीतहरू प्रेम, यो एक केहि भन्दा मलाई बढी दुःखी बनाएको, र बस छैन भयो छ कि मृत्युको विपत्ति आइलाग्यो को कारण. यो टिभी अन गर्न वा समाचार पढ्न र हामी यस संसारमा गलत गर्न सक्ने सबै हेर्नुहोस् अकल्पनीय छ. म मिडिया मलाई भन्छ के बाट अलग ती विशेष उल्लेख अवस्थामा बारे केहि थाहा छैन, म भन्न पर्छ हुनत म हरेक एक मा केही राय छ. के मलाई सबैभन्दा पीडादायी छ कुनै एक सत्य खोजिरहेका र न्याय स्थापना देखि मनसाय को आन्दोलन noticing छ कि भन्ने तथ्यलाई छ, अरूलाई खोल्दै र alienating गर्न, थप विशेष सेतो skinned मान्छे र पुलिस. म यसलाई हेर्न बाटो, मात्र कुरा नस्लवाद प्रचार गर्ने मंच पहिलो आफ्नो दौड र आफ्नो अपमान दिने मा खडा ती हुन्. सुरुमा, म भर्खर कालो skinned मान्छे को हात द्वारा सेतो skinned मान्छे को हालै ठाउँ लिएका छन् कि बारे भयानक हत्या पढ्नुभयो कथाहरू लिंक को एक गुच्छा पोस्ट थियो, म भन्न चाहन्थे किनभने कालो skinned मान्छे भयानक वा कम सेतो skinned मान्छे भन्दा हुन्, तर यहाँ सबैलाई पीडित र सबै सिकार छन् कि भन्न. कति सेतो skinned मानिसहरू पुलिस संग sketchy रन इन्स बारेमा सोधे छ? म तिनीहरूलाई थियो गर्नुभएको तपाईं ग्यारेन्टी, पुलिस गल्ती. Im यहाँ एक पक्ष लिन प्रयास छैन, मेरो बिन्दु नस्लवाद जीवित राखन मात्र व्यक्तिहरूलाई मानिन्छ अर्को जाति को गर्नेहरू विरुद्ध घृणा बाहिर कार्य गर्नेहरूलाई छैनन् भन्ने छ, यो आत्म-उत्प्रेरित घृणाको एक कार्य हो, न्याय प्रभु पर्छ. तर जब एक सम्पूर्ण समुदाय वा समूह आफ्नो खाल अन्यको कुनै पनि फरक पार्छ भन्ने विश्वास गर्न जारी. आफ्नो खाल विश्वास गर्नेहरूले तिनीहरूलाई कार्य वा अरूको नियन्त्रणमा व्यवहार गर्न अनुमति दिन्छ वा तिनीहरूलाई आहत हुन विशेष अनुमति दिन्छ. दौड अपराध छैन. र हाम्रो छाला हामी जो छैन, हामी अफ्रीका वा मेक्सिको मा वृद्धि कि, हाम्रो छाला रोगन हाम्रो संस्कृति वा पैतृक छैन. म कालो मानिस यात्रा ली रूपमा जान्न चाहन्छु छैन, र म याकूबले रूपमा ज्ञात गर्न कालो मानिस चाहँदैनन्, वा याकूबले सेतो मानिस. म याकूबले छु, तपाईं यात्रा हुनुहुन्छ. हामी मात्र यो त्यहाँ पनि भन्ने acknowledging यस बढ्दै भाग अग्रिम. तर त्यहाँ कुनै भाग छ. सबै भाइहरूलाई. सबै बहिनीहरू. सबै छोरा र प्रभुको छोरी. म मानिस चोट हुनुहुन्छ दु: खी छु, तिमी मेरो जीवनमा प्रेरित गर्नुभएको लागि धन्यवाद!
बर्टन • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:13 बजे • जवाफ
सत्य भाइ तर केही, तापनि म सेतो छु, म ya'll संग लाश राख्ने बाकस मा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, र तपाईं सन्ताप गर्दा दुःखित तुल्याउन. म लामो समय को लागि तपाईं निम्न गरिएको छ र यो ट्रयाक definately मेरो मनपर्ने मध्ये एक छ! तपाईं प्रभु यात्रा हामीलाई लागि गरिरहनुभएको प्यार, यसलाई जारी राख्नुहोस्.
Dayo • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:25 बजे • जवाफ
Coulda भएको जो कोहि… यात्रा ली * औंठी माथि *
शेल्बी • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:35 बजे • जवाफ
हे यात्रा, आफ्नो हृदय साझेदारी को लागि धन्यवाद. जबकि म एक जवान कालो मानिस छैन, र म साँच्चै कहिल्यै बुझ्न सक्छ, मैले तपाईंलाई चोट प्रयास गर्दै छु. धन्यवाद बिन्दु माथि ल्याउन खराब प्रहरी अधिकारीहरु र यो लागि कठिन बनाउन 90% को राम्रो अफिसरहरू र म हामी लायक सबै परमेश्वरको स्वरूपमा नै हो कि आफ्नो बिन्दु प्रेम र हाम्रो आशा हुनुपर्छ जहाँ कि छ. अनुग्रह र शान्ति भाइ.
TBrant • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:38 बजे • जवाफ
म गीत मानिस मा तपाईं महसुस. म यो विगतमा तपाईं भएको छ कि दु: खी छु र म यो हिंसा दुःख गरिएको छ जो सबै ती रूपमा संग चोट छु. प्रेम जीवित र अन्यसँग हिड्ने, तिनीहरूलाई चोट र तिनीहरूलाई रुन्छ अर्थ, हामी दुःख ती संग गर्न भनिन्छ के छ. म हाल व्यक्तिगत स्तर मा कुराहरू संग संघर्ष छु रूपमा म प्रार्थना लागि अनुरोध तर म पनि तपाईं र साथै प्रार्थना यो संलग्न मान्छे राख्न छौँ. तपाईं bro मन. तपाईं कहिल्यै पूरा हुन सक्छ तर म तपाईंलाई प्रेम.
एन्ड्रयू • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:43 बजे • जवाफ
म यो #couldabeenme बुझ्दैनन्. यात्रा म केही एकदम समय को लागि एक प्रशंसक भएको छैन केवल तपाईं तर अन्य मसीही rappers अब फर्ग्यूसन मा के भयो बारेमा बोलेको छ कि, तर म फर्ग्यूसन अधिक पुकारा संग हालै निराश भएका छन्.
म एक हुँ अग्रिमसँग हुन जाँदैछु 25 वर्ष पुरानो सेतो पुरुष. म के यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक अल्पसंख्यक हुन जस्तै छ बुझ्दैनन्. म कहिल्यै मेरो दौड को भन्दा झिकेर गरिएको छ जस्तै महसुस छैन. म कहिल्यै मेरो दौड को तल patted गरिएको छ. म कहिल्यै मेरो दौड को फिर्ता आयोजित गरिएको छ. यी मैले बुझ्न भन्न खिचडी कुराहरू छन्.
जबकि हामी कुराहरू बारे कुरा गर्दै म #couldabeenme ट्याग कुरा गर्न दिन्छ बुझ्न खिचडी. साँच्चै?!? यो तपाईं भएको सक्छ?!? तपाईं एक सुविधाजनक भण्डारबाट सिगार चोरी हुनेछ र त्यसपछि एक COP सुने छैन? तपाईं गिरफ्तारी प्रतिरोध हुनेछ? तपाईं मारा वा शारीरिक थियो वर्दी मा एक अधिकारी हानि?!?
तपाईंले ती कुराहरू के थियो किन मलाई बता!
म के म विदेशी बस्ने गरेका छन् अमेरिकामा एक अल्पसंख्यक हुन जस्तै छ कहिल्यै थाहा हुनेछ भनेर बुझ्न गर्दा हेर्न. म युरोप मा बस्ने 8 वर्ष. युरोप मा समय खर्च गर्दा म हरेक देश एक फरक संस्कृति छ भेट्टाए. मेरो परिवार भनेर पाइने कुरा को एक धेरै रोचक थियो जब हामी तिनीहरूले बेलायत थिए युरोप मा कालो व्यक्ति पूरा. ती सबैलाई उचित अंग्रेजी बोले र धेरै नै विनम्र र राम्रो लुगा थिए. तिनीहरूलाई कुनै पनि आफ्नो घुँडा वरिपरि आफ्नो प्यान्ट लगाएका.
उनीहरूले युवा गुंडे जस्तै कार्य गर्न को लागि यो अस्वीकार्य थियो जहाँ त्यहाँ फरक संस्कृति थियो हेर्न. जहाँ यो सामान्य हो यहाँ अमेरिकामा त्यहाँ संस्कृति को pockets छन्, पनि एक गर्दनमार जस्तै कार्य गर्न उच्च. यो किन मामला छ???
यो सबै फर्ग्यूसन संग के गर्न छैन?? राम्रो सबैलाई यो माइकल भूरा बच्चा राम्रो बच्चा कल छ. म अर्थ उहाँले कलेज जाँदै छ! राम्रो बराबर कलेज जाँदै गर्दा राम्रो बच्चा रहेको देखि? दिन्छ सत्यतथ्य हेर्न उहाँले राम्रो बच्चा थियो. उहाँले चोर र एक समस्या निर्माता थियो. अन्त मा त्यो अधिकार सुन्न थिएन र यो अन्ततः आफ्नो मृत्यु नेतृत्व.
के म यात्रा बुझ्दैनन् लागि यो हुन छ, लागि “couldabeenme” तपाईंले यी कुराहरू पनि गर्न हुनेथियो. तपाईं एक भण्डारबाट चोर्न हुनेथियो र त्यसपछि पछि तपाईं रोकियो कि COP लडेका.
अन्त मा, के भयो दुःखी छ! तर यो तपाईं भएको सक्छ. यो मलाई गरिएको छ सक्छ. किनभने म एक हुँ भनी छैन 25 वर्ष पुरानो पुरुष. म चोर्न किनभने थियो छैन र म एक COP लड्न छैन यो छ. ती यहाँ मुद्दा हो. दौड छैन.
Kori • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:46 बजे • जवाफ
माइकल • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:48 बजे • जवाफ
अनुग्रह, शान्ति, प्रेम र कृपा हाम्रो परमेश्वर र पिताजी देखि
पहिलो, म आफ्नो मुक्तिको र सेवक हुड भाइ लागि प्रभु प्रशंसा गर्न चाहन्छु. तपाईं राम्रो पिता प्रतिनिधित्व. म तपाईं परमेश्वरको एकदम मेरो पैदल मेरो मुक्तिको मा प्रारम्भिक असर गर्न प्रयोग गरेको पहिलो कलाकार हुनुहुन्छ भनेर भन्न अनमोल छु. को डिसेम्बर मा सुरक्षित भयो 2006 र म यति गहिरो यो सिर्फ समकालीन उपासना सुनेर संक्रमण गाह्रो थियो कि हिप हप / शहरी संस्कृति सम्मिलित थियो, “मलाई संगीत मनपर्छ”. यो बाइबलीय उपासना गर्न सम्बन्धित छ र यो कसरी भिन्न रूपमा सांस्कृतिक जागरूकता सन्दर्भमा आफ्नो साक्षात्कार र सल्लाह को सराहना.
प्रभु तपाईंलाई आशिष र श्रम को फल बढाउन सक्छ!
पास्टर बिल, तपाईं अनुग्रह र शान्ति साथै…म पूर्ण गिरफ्तारी प्रतिरोध सन्दर्भमा सहमत हुनत म कडा त्यहाँ खडा हुनुभयो कि हुनुपर्छ र अनुचित प्रक्रियाहरु / कार्यहरू लागि लागू मानक हो भन्ने विश्वास गर्छन्.
माइकल • डिसेम्बर 4, 2014 मा 4:50 बजे • जवाफ
पूर्ण गीत मनन गर्न भूल. मेरो प्यारो भाइ म यो गीत यो हुन डिजाइन भएको थियो के साँचो हिप हप छ र के encompassed विश्वास…
Zander • डिसेम्बर 4, 2014 मा 6:10 बजे • जवाफ
मलाई व्यक्तिगत रूपमा म यो गीत सहमत छैन. यो अमेरिका मा साँच्चै छ कि नस्लवाद देखाउँछ. सबैले सफेद बस किनभने तिनीहरूले काम त्यहाँ गरे सजीव हुन् भनेर complains. यो बच्चा गोली गर्ने कालो मानिस थिए भने (जसलाई अधिकारीहरु बन्दूक लागि पुगेको) उहाँलाई केही पाठका भने को थियो शट गरिएको. बस मेरो राय र घृणा मा ल्याउन :)
जेसन • डिसेम्बर 4, 2014 मा 6:24 बजे • जवाफ
म संवाद ब्रो गर्न आफ्नो इच्छुकता कदर. हामी देशमा मुद्दाहरू पक्ष र त्यसो गर्न मात्र बाटो मा सबै मृत्यु हुनु आवश्यक छ कि ख्रीष्ट येशूको मार्फत छ छ!
हामी सबैलाई ख्रीष्टको प्रेम देखाउन आवश्यक – त्यसैले म सँगै राख्न प्रेम को एक सानो सकारात्मक भिडियो… https://m.youtube.com/watch?v=7oPOZppRZRk
व्हिटने • डिसेम्बर 4, 2014 मा 6:26 बजे • जवाफ
यो म कसरी महसुस ठीक छ! यो एक सुन्दर र शुद्ध अभिव्यक्ति हो. संग र तपाईं bro लागि प्रार्थना! म तपाईंलाई प्रेम र आफ्नो सेवकाईको सबै कदर.
बेन • डिसेम्बर 4, 2014 मा 7:15 बजे • जवाफ
यात्रा बस तपाईं म तपाईं को लागि चोट छु र समाधान को भाग हुन बोझ महसुस थाहा चाहन्थे. म ज्यादातर सफेद बच्चाहरु संग एक उपनगरीय चर्च मा एक युवा निर्देशक हुँ, म मेरो बुधवार रात अध्ययन तिनीहरूलाई दुवै पक्षले किन त्यहाँ चोट छ तिनीहरूलाई बुझ्न मदत देवता शब्द मा अन्तिम रात डाइभिङ खर्च, विश्वासीहरूलाई रूपमा हामी प्रेम ढाक्ने सबै र ख्रीष्टको चम्कने ज्योति दिनु हो कसरी, हामी कसरी गर्ने रुन्छ ती संग रुन्छ र जो आनन्दित ती संग रमाउने छन्. त्यसपछि तपाईं संग परिचित हुन सक्छ जो विश्वास Rx भनिने घटना @ राती खर्च, वयस्कहरूको लागि त्यही सन्देश दिने. म निको गर्न सडक संलग्न सबै को लागि लामो छ थाहा र हामी राजा हाम्रो आँखा केन्द्रित र ख्रीष्टको जस्तै बाँच्न गर्दा रियल मात्र गरिनेछ. म दुवै पक्षले दुखाइ लागि यति दु: खी छु र तपाईं म भएको थाहा र अन्धो आँखाले ती बीच हृदय परिवर्तन को लागि प्रार्थना गर्न जारी हुनेछ चाहनुहुन्छ. आफ्नो टाउको राख्न, भगवान विश्वासी र राम्रो छ, तपाईं के परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष् दिनुभएको छ गर्न जारी, तपाईं फरक गर्दै.
Osakpolo • डिसेम्बर 4, 2014 मा 7:43 बजे • जवाफ
यो गीत लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो विचार पनि मेरो दिमागमा जाँदै गरिएको छ किनभने. एक रूपमा 21 बोस्टनका वर्ष पुरानो कालो पुरुष म तपाईं जस्तै क्रिश्चियन मानिसहरूलाई हेर्न सक्छन् भनेर बुझ्न.
फेरि पनि धन्यबाद.
angelique • डिसेम्बर 4, 2014 मा 7:54 बजे • जवाफ
गर्नुभएको एक भएको सक्छ मेरो4छोराहरू! तपाईं यात्रा धन्यवाद. म मान्छे एक तर्क जीत प्रयास रोक्न र साँच्चै हाम्रो मानिसहरूको हृदय सुन्न भनेर प्रार्थना.
GageGuest • डिसेम्बर 4, 2014 मा 8:24 बजे • जवाफ
teip ली मेरो हृदय मृत्यु chocked gettin मानिस को नवीनतम भिडियो हेरेपछि पनि saddens.
म wrongfully अप बोल्ने मा तिमी मान्छे न्याय. म एक धार्मिक व्यक्ति बाहिर यो देख्यो एकअर्कालाई प्रेम गर्न एक आज्ञा को सट्टा हेर्न. म wrongfully न्याय छन् येशूमा भाइहरूलाई दु: खी छु.
म सही छैन भनेर थाहा र म देवता दैनिक प्रेम आवश्यक. उहाँले मलाई मनोरम छ. उहाँले एक भयानक फिक्री आक्रमण बाट आज मेरो जीवन बचाउनुभयो. म मर्न थियो लाग्यो तर उहाँले यसलाई अनुमति थिएन.
म मेरो सबै सामाजिक मिडिया देखि आफैलाई अलग गर्न लागिरहेको छु (तिनीहरूलाई मेटाउन) नजिक बन्न र आत्मा र सत्य येशूसित हिंड्न!
के तपाईं कहिल्यै कुरा गर्न चाहन्छु वा छ भने कुनै पनि मेरो नम्बर हो सल्लाह 580-509-5059
Mauricio Arriaga • डिसेम्बर 4, 2014 मा 10:45 बजे • जवाफ
ब्रो म यो साँच्चै सराहना गर्नेछन् तपाईं मेरो लागि प्रार्थना गर्न सक्छौं म Iike उहाँलाई पर्याप्त म छु म छैन किनभने म भगवान बढी आवश्यकता महसुस 13 कुजेस्तान क्यालिफोर्निया र ब्यक्तिहरुबाट वर्ष पुरानो केटा तपाईं म एक नयाँ सृष्टि हुन चाहनुहुन्छ म क्रिश्चियन हुँ मेरो भूमिका मोडेल हो तर म फिर्ता पाप संग जा मा राख्न र म पाप म मेरो जीवन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ मा चलान थाकेको छु प्रार्थना कि भगवान त म एक राम्रो क्रिश्चियन हुन सक्छ मलाई काम गर्छ <3 it coulda been me who got shot we never know when we gonna die we never know when god is gonna call our name and say its time for you to go that's why we should always be ready we need to say every night and every time you go out god if I don't want up or I don't come back home pleaz accept me into your throne of glory and eternal life <3
Denzel Patricks Ny जुनियर. • डिसेम्बर 5, 2014 मा 12:06 छु • जवाफ
म गीत सुने छैन तर गीत बस भन्छ सबै र म यो तपाईं सबै भन्दा राम्रो के भन्ने राम्रो गीत कारण हो. परमेश्वरले तपाईंलाई थप आशीर्वाद
NicholasTracy • डिसेम्बर 5, 2014 मा 1:30 छु • जवाफ
सुरुमा, जब म यी पोस्ट देखे, म यसलाई प्राप्त भएन. म धेरै ज्यादा बस लाग्यो यो कष्टप्रद थियो, र म को पनि गर्व अब छैन. यो गीत र डेरेक माइनर हालको जारी सुनेर पछि, म अनुग्रह यो एक ठूलो भाग हो भनेर सम्झाए थियो, र भाग म भन्दा हराइरहेको थियो. म फरक दृष्टिकोण देखि यो सोच्न समय लिएनन्. विश्वविद्यालय उपस्थित एक मध्य-वर्ग सेतो मान्छे रूपमा, म हामी अरूले फरक देख्यो छन् कि एक कठिन समय समझ थियो, तिमि र म. तर, म समय लिएर एक पटक त्यसो गर्न, मेरो आँखा म मेरो सारा जीवन मा भएको छु ठाउँ भन्दा फरक ठाउँमा खोलिएको थियो. म भवदीय आफ्नो दृष्टिकोणबाट कुराहरू हेर्न भनेर समय छैन लागि क्षमा गर्न चाहनुहुन्छ, र म मनमा अनुग्रह यो सबै भेट्नुपर्छ गर्न सबैलाई प्रोत्साहन गर्न चाहनुहुन्छ. यो महत्वपूर्ण छ. म यो गीत पोस्ट लागि धन्यवाद, जारी लागि डेरेक माइनर आफ्नो, र 11Six चालक दल सबै यस मुद्दाको बारेमा बोलेको र आफ्नो बुद्धि साझेदारी.
Kentrel • डिसेम्बर 5, 2014 मा 1:58 छु • जवाफ
यो गीत मानिस कुनै झूट मा यात्रा ली धेरै माया. हामी नाली को हाम्रो टाउको पुल गीत यस प्रकारको आवश्यक, र परमेश्वरले हामीलाई गर्न चाहन्छ के हेर्न. म सिर्फ यो मानिस जस्तै गीत गर्न मेरो मिसन छु. परमेश्वरले हामीलाई यो सबै कठिन समय मा गर्न मद्दत गर्न सक्छ.
एडवर्ड • डिसेम्बर 5, 2014 मा 8:11 छु • जवाफ
म अर्कान्सस मा एउटा सानो सहरमा एक चर्च पास्टर छु र म प्राप्त कुनै स्पष्ट कारण लागि प्रहरी रोकेको छैन……..अरु केहि. त्यो सधैं मामला भएको छैन. मेरो भाइ र म रोकियो थिए र gunpoint मा कार बाहिर प्राप्त गर्न भन्नुभयो र सबै हामी गरे उत्तरी विस्कन्सिन मा एक शहर मा ड्राइव थियो. हामी थिए 19 वा 20 वर्ष पूरानो. पाँच वर्षअघि हामी घर हिड्ने थिए र एक प्रहरी कार बिस्तारै हामीलाई रोक अघि तीन ब्लक या त हामीलाई पीछा. तिनीहरूले हामी एक डकैती केही suspects जस्तो भने.
म यसलाई अब पूर्णतया यो अझै पनि गर्न सक्छन् भनेर कुरा चाँडै साह्रै गलत जान विश्वास हुँदैन भन्नुभयो.
म KAA मार्फत मसीही हिप हप गर्न शुरू भएको थियो र म आफ्नो गीतहरू मा शब्द गर्न समय सबै सुन्न. “उठेर” चिसो छ, चिसो, चिसो.
तपाईंको शब्द साहसी ख्रीष्टको बारेमा सत्य बोल्न र 116.
म यो बोल्ड कथन ठूलो तस्वीर मा देखिन्छ र अलग गर्दैन र एक घटना ध्यान जो कदर.
जब तपाईं भने तपाईंलाई थाहा हरेक कालो मानिस यस अनुभव छ…म तिनीहरूलाई एक हुँ.
कुनै पनि समयमा मलाई बाहिर पुग्न.
भाइ प्रचार राख्न.
OtiatoMargy • डिसेम्बर 5, 2014 मा 10:06 छु • जवाफ
येशूले हामी मित्र कस्तो छ; हाम्रा पाप र सहन griefs, सबै किनभने हामी कुनै प्रार्थनामा परमेश्वरको सबै बोक्न गर्छन्।. यो कठिन छ तर परमेश्वरले पर्याप्त भन्दा बढी छ कि हामी हाम्रो असहायपन उहाँको अनुग्रह गर्न सम्पूर्ण प्रस्तुत यदि अवरोध गर्न सक्षम छ. हामी धेरै प्रश्नहरू सोध्न सक्छौं, हाम्रो पहिचान आदि प्रश्न, मात्र हामीले पनि धर्मशास्त्रको खोजी भने अझै परमेश्वरको पहिले नै उहाँको वचन प्रदान गरेको छ सबै जवाफ सम्झना. हामी कहिल्यै परमेश्वरको आवश्यक छ भने, यो विश्वास छ कि अब, हामी प्रणाली महसुस रूपमा हामी असफल रक्षा गर्न भरोसा. भगवान आवश्यकता को समय मा एक धेरै वर्तमान मद्दत हाम्रो शरण र बल हो… हाम्रो आशा हाम्रो प्रभु येशू र मुक्तिदाता मार्फत बाइबल को परमेश्वरले छ र शान्ति को राजकुमार, यो प्रिय मा त हामी स्वीकार गर्दै मर्न र हाम्रो विविधता बिना स्वतन्त्र गर्न उहाँले हाम्रो ठाउँ लिए यी कारणहरूले गर्दा हो. हामी यो दरमा अनिवार्य अर्को घटना लागि प्रतीक्षा पर्दैन, परमेश्वरले फर्कन गरौं, हाम्रो पहिलो प्रेम. हामी उहाँलाई बायाँ तर उहाँले हामीलाई छोडेर कहिल्यै. उहाँले प्रतीक्षामा छ, हाम्रो घाउ निको पार्न र रोयल्टी हामीलाई लुगा उहाँको छोराछोरीलाई कुनै अधिकार छ जो दासको रूपमा लज्जित छैन हामी मर्यादित छन् त. परमेश्वर हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई हौं, उहाँले एक जिम्मेवार पिताजी छ हामी उहाँलाई आवश्यक! उहाँले हामी मानव अधिकार सहित आवश्यक सबै छ!
Sammychris68@gmail.com • डिसेम्बर 5, 2014 मा 10:10 छु • जवाफ
यसको मात्र अमेरिकी, यसलाई संसारभरि जहाँसुकै हुन्छ…उहाँले एक मुसलमान हुँदा म त्यो एक क्रिश्चियन छ किनभने जहाँ एक भाइ पेट्रोल द्वारा आफ्ना सँगी भाइ alife जल साक्षी, जहाँ3जहाँ सेट जल्दै गरेको अपराध को लागि तिनीहरूले portharcourt नाइजेरिया छैन प्रतिबद्ध निर्दोष विद्यार्थी, जहाँ आत्महत्या विस्फोट ठाउँ लिन्छ, जहाँ सैनिकहरू एक राजनीतिक कारणले एक समुदाय मा एक सम्पूर्ण नागरिक हत्या, नाइजेरिया जो अनौठो कुराहरू पनि bibble हुन्छ मा कि देश को छ. हामी सबै दुनिया भर उर प्रार्थना आवश्यक…मुस्लिम साथ रहन सजिलो छैन.
MargureteMensa • डिसेम्बर 5, 2014 मा 2:31 बजे • जवाफ
Whatev. यहाँ एउटा सुझाव छ: quitcherb * tchin, माथि बढ्न र आफ्नो आत्म केन्द्रित भावना बाहेक समाजलाई सकारात्मक कुरा योगदान. तिनीहरूले तरिका रेटेड भन्दा हुनुहुन्छ.
Marchauna • डिसेम्बर 5, 2014 मा 3:07 बजे • जवाफ
स्पोकेन मा WinterJam तपाईं सुनेपछि को अवसर थियो, वाशिंगटन र धेरै आफ्नो संगीत आशिष् थियो. आज आफ्नो वेबसाइट जाँच र फर्ग्यूसन बारेमा आफ्नो पोस्ट देखे. साझा लागि धन्यवाद. भगवान मेरो आँखा हालै मात्र अमेरिकामा नस्लवाद र भेदभाव को वास्तविकता र मण्डली खुलेको छ. उहाँले मेरो हृदय भङ्ग गरेको छ, र म जान्न म त म एक बाइबलीय छ सक्छन् रूपमा धेरै प्रयास गर्दै छु, मनोवृत्ति परमेश्वरले आदर. तपाईंको पोस्ट मलाई छोयो र मलाई भाइबहिनीहरू जसको हृदय र आँखा अझै खुलेको गरिएको छैन साझेदारी गर्न केही दिन्छ. एक प्रका लागि प्रार्थना7चर्च र पवित्र आत्मा आफ्ना जनहरूलाई विश्वस्तता ल्याउन लागि “पश्चिम”. कृपया मलिन बढ्न छैन वा अझै हरेस…ख्रीष्टको शारीरिक तपाईंको सन्देश आवश्यक, दृष्टि, र आवेग.
fundmc • डिसेम्बर 5, 2014 मा 3:17 बजे • जवाफ
सकारात्मक सन्देश प्रेम. हामी प्रभु हाम्रो विश्वास राख्न र प्रयास समयमा सुसमाचार साझेदारी गर्न सम्झना छ.
एल • डिसेम्बर 6, 2014 मा 11:33 छु • जवाफ
यात्रा, तिमीलाई धेरै धन्यवाद. तिनीहरूले तपाईंलाई घृणा गर्नुभएको अरूको मायालु लागि धन्यवाद. आफ्नो मण्डलीको लागि ख्रीष्टको हृदय प्राप्त लागि धन्यवाद – एकीकृत एक – र उहाँलाई जस्तै हिड्ने, जब यो कठिन छ र यसलाई गर्दा सजिलो छ. तपाईं र म आदर आफ्नो परिवार र तपाईं राम्रो तरिकाले येशूले प्रेम जानुभएको भुमरीमा. धन्यवाद.
Kathleen • डिसेम्बर 7, 2014 मा 3:11 छु • जवाफ
म सिर्फ यो मार्फत ठेस खाएर केहिपनि तपाईंको प्रतिक्रिया प्रामाणिक छ भनेर भन्न, हृदय र सजग देखि. म आफ्नो दुख साक्षी र तपाईं संग heaviness महसुस. कारण मैले मेरो लिङ्ग यसलाई धेरै बताउन सक्नुहुन्छ. हामी के भित्र आधारित मान्छे पहुँच र सौन्दर्य हेर्न जब गरेको दिन कल्पना गरौं भन्ने छ.
Margurete • डिसेम्बर 7, 2014 मा 12:27 बजे • जवाफ
ठिक छ, त्यसैले म यो कसरी जान्छ हेर्न. पहिलो, म सबै पोस्ट टिप्पणी तपाईंको दुःखी sappy कराउँदै बच्चा गीतको पक्षमा हुन छ अनुमान वा पोस्ट प्राप्त छैन. त्यसपछि यो तपाईं वा एक देखिन्छ आफ्नो (सकारात्मक) टिप्पणीकारहरू अझै एक मानव जगतले को शाब्दिक हजारौं व्यक्ति हिंसा मा व्यक्ति संसारभरि दैनिक नष्ट भन्ने तथ्यलाई मा विडंबना हुन्छ वजन भन्दा, गिरफ्तारी प्रतिरोध गर्दा दमा कालो मानिस मर्छ, यो क्यामेरा मा समातिए गर्न हुन्छ र अब हामीले उहाँलाई sainted छ, दौड कार्ड प्ले, सबै प्रहरी राष्ट्रव्यापी रूपमा अचाक्ली राष्ट्रिय विद्रोह लागि सशक्त र भनिन्छ decried. केवल एक प्रश्न: यदि यो व्यक्तिगत जस्तै हार्ड आफूलाई र आफ्नो परिवारको लागि जीवित बनाउन कानुनी काम थियो, अवैध गैरकानूनी गतिविधि को सट्टा न्यायसंगत अन्यथा चलनअनुसारको फैशन उहाँले अझै पनि आज जीवित हुन सक्छ? कम से कम हामी आफ्नो sappy आत्म दया बचाउनुभयो हुनेछ.
WhiteVictim • डिसेम्बर 8, 2014 मा 4:05 बजे • जवाफ
म विभिन्न जात र पृष्ठभूमिका युवा संग काम गर्ने एक सेतो मानिस हुँ. क्षणमा, 80% को समूह कालो छ र आफ्नो गीत मलाई offends. म समूह बाहिर दिन आफ्नो सीडी गरेको धेरै प्रतिहरू खरिद तर कुनै थप. आफ्नो गीत को फ्लिप पक्ष “यो मलाई गरिएको छ सक्छ” के तपाईं साँच्चै भनिरहेका छन् कि छ, “यसले तपाईंलाई गरिएको छ सक्छ” (सेतो मानिस) मलाई यो गरेका सक्छ (कालाे मान्छे). तपाईं हृदय मा वास्तविक मुद्दा WHITEwashing छन् र पाप हो. मसीही कलाकार रूपमा राम्रो थाहा हुनुपर्छ तर तपाईं गरिरहेका छन् के अरूलाई गरिरहेका छन्: तपाईं आफ्नो संगीत बेच्न र पैसा बनाउन अरूको मृत्यु मा capitalizing छन्. तपाईं अल Sharpton फरक थाहा छन्. कृपया बलात्कार को कथा पढ्न & सेतो जोडी Channon मसीही हत्या, 21, र प्रेमी क्रिस्टोफर Newsom, 23 मान्छे को हात मा जो कालो हुन भयो. सफेद को भयंकर मृत्यु कागजात वा र्याप गीतहरू बेचन छैन किनभने यो कहानी शीर्षकहरू गरे कहिल्यै. यो तपाईं भएको सक्छ तर यो निश्चित तिनीहरूलाई भयो. त्यसैले, किन तपाईं बारेमा गाउन गर्छन्. आशा छ, तपाईं यो पोस्ट गर्न र रहिरहनेछ पोस्ट अनुमति दिन्छ.
टम • डिसेम्बर 8, 2014 मा 10:54 बजे • जवाफ
वाह. यो एक सिकार आफ्नो सारा जीवन हुनुको दयनीय हुनुपर्छ. दुःख पक्कै कम्पनी प्रेम, हुनत.
आफ्नो गीत लगभग आफैलाई पनि हरेक दुष्ट कुरा कहिल्यै मलाई गरेको विचार को लागि मलाई माफ गर्नुहोस् महसुस गरे. तपाईं र मलाई बीच फरक के? म विगत देखि सिक्न चयन, र सार्न. शायद म गलत थियो. शायद म wronged थियो. कसलाई मतलब.
म भन्दा बलिया छु.
p.s. म सेतो पुरुष हुँ, र एक किशोर पटक कहिल्यै चार्ज रूपमा म पनि कानून प्रवर्तन संग confrontations छन्. म ती परिस्थिति हरेक एक लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद र म तिनीहरूलाई सिकेका कसरी.
थमस • डिसेम्बर 10, 2014 मा 11:38 बजे • जवाफ
यात्रा ली यति हल्का चमड़ी छ, उहाँले सेतो रूपमा पारित गर्न सक्छ. पत्नी र बच्चाहरु पनि देख सेतो छन्. उहाँले कसरी साँच्चै कालो हुन दावी वा कालो मान्छे नै अनुभव गर्न सक्छन्.
हो म सेतो छु र पनि म जीवन कालो छाला संग अश्वेतहरुको लागि कठिन छ भन्ने थाहा.
प्रभु येशू आउनु!
यात्रा ली • डिसेम्बर 22, 2014 मा 1:59 बजे • जवाफ
यो टिप्पणी सङ्कष्ट छ र तपाईं अमेरिका मा कालो मान्छे को लागि जीवन बारे बुझ्ने कसरी सानो देखाउँछ
लोरी • डिसेम्बर 21, 2014 मा 4:14 छु • जवाफ
आज, दुई NYPD अधिकारीहरु को हत्या पछि, मैले बल्ल म एरिक Garner_I को भिडियो देख्यो खोजी सोचा, म एक पटक मात्र हेर्दै यो सम्हाल्न सकिएन; म बिल्कुल हूँ DIS-विश्वास!! आँसु बगिरहेको छन्….कसरी कमबख्त पुलिस हिम्मत, तिनीहरूलाई कसरी Dar !! म एरिक परिवार को लागि माफ छु, र मित्र. म त्यो वास्तवमा एउटा ठूलो मानिस थिए भनेर बुझ्न, एउटा सुन्दर, दिने प्राण. RIP एरिक गार्नर.
म एक सेतो महिला हुँ, मेरो प्रारम्भिक 50 का मा, म जस्तै एरिक गरे जहाँ शहर मा बस्ने कहिल्यै गर्नुभएको. म कुनै पनि हालतमा सुअवसर छु; म कडा परिश्रम, अन्त भेला बनाउन संघर्ष छ; म काम ठाउँमा गलत भएको; वास्तवमा तंग, निकाल, एक भन्दा बढी अवसरमा; म कुनै अधिकार, कसैले पनि मतलब गर्दैन, को EEOC, एक crock छ ….! मेरो जीवन भर, म एक cocky प्रहरी अधिकारी संग एक रन वा दुई छन्; तर, म पनि धेरै राम्रो प्रहरी अधिकारीहरू अनुभवहरू छन्. त्यहाँ एरिक विरुद्ध लिएको को कार्यहरू लागि पर्याप्त पर्दैन क्षमा गर्नुहोस राम्रो छ; उहाँले अतः उल्लङ्घन थियो, र मूलतः एक cocky प्रहरी अधिकारी को हात मा हत्या. म हाम्रो न्यायिक प्रणाली मा विफलता बुझ्न सक्दैन; म सिर्फ मेरो टाउको हल्लाउनु, म के गर्न थाहा छैन; जबकि समाचार हेर्दै, र सुन्ने stories_it मलाई repulses गर्न! मेरो आमाबाबुले मलाई उठाएको रंग छैन हेर्न(को)… हामी सबै एक छन्; हामी सबै जीवन विभिन्न चल्छ देखि आउँछन्; हामी धेरै संघर्ष छ, जीवन भर धेरै संघर्ष; तर एउटै रगत हाम्रो नसाहरु मार्फत बग्छ. हुनत, म मा भएको कहिल्यै गर्नुभएको “व्यवस्थाको गलत पक्ष;” मेरो भाइ छ, उहाँले सेतो छ गर्न, जेलमा केही समय गरे(10वर्ष) अनुपात बाहिर पूर्ण Blown थिए केही पैटी अपराधको लागि; उहाँले अब 15yrs बारेमा लागि बाहिर छ; उहाँले awhile लागि जहाँ एक टखने कंगन थियो(2वर्ष,) भनेर स्थानीय पुलिस राम्रो उहाँलाई थाहा प्राप्त गर्न को लागि एक कारण थियो, र उसलाई परेशानी, निरन्तर, त्यो समयमा. यो 15yrs भएको, सं मुद्दाहरू संग, र उहाँले अझै पनि यो दिन hassled हुन्छ, यो pathetic छ; उहाँले अझै पनि अपराध लागि तिर्ने छ, उहाँले राम्रो आफ्नो समय पूरा भएको छ हुनत. यो केवल एक काला समस्या छैन, यो हाम्रो समस्या सबै छ. त्यहाँ धेरै आज सबै गलत छ, र मूलतः, हामी अधिकार साँच्चै छैन…किनभने हामी यसलाई त सही बाटो के छैन भने हामी गलत छन्, र केही तरिका वा अर्को मा सजाय. हुनत, यस संसारमा धेरै खराब मान्छे हो, अर्को व्यक्ति को जीवन लागि सानो सन्दर्भमा भन्ने कसैको, चोर, सबै रंग को गुंडे; हामी प्रहरी अधिकारीहरू लडाई अपराध मद्दत गर्न आवश्यक छ; उनीहरू त्यहाँ जोखिम बसोबास धेरै दिन के; तर आफ्नो नियन्त्रण, शक्ति को आफ्नो स्तर, मान्छे सुन्नुको कमी, cockiness आफ्नो अर्थमा; यो तपाईं दोषी छन् को मामला सबैभन्दा सधैं छ, सम्म निर्दोष साबित, र यो सबै राष्ट्र अधिक मान्छे उपचार भइरहेको छ तिनीहरूले प्रहरी अधिकारी को भन्दा कम छन् जस्तै(“व्यवस्था आधिकारिक।”) यसलाई बन्द गर्नै पर्ने! हाम्रो “ठूलो” राष्ट्र, छैन साँच्चै त्यसैले यो समयमा ठूलो छ…सरकार संग शुरू, स्थानीय प्रहरी तल trickling.
फिर्ता एरिक गर्न, फेरि, म त दु: खी छु, र आफ्नो परिवार र साथीहरूको दुःखी. म धेरै misfortunate घटना…म लगनशील भई लागिरहेमा उहाँको परिवार केही न्याय प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा, को पाठ्यक्रम यो कहिल्यै एरिक प्रतिस्थापन गर्न सक्छ.
शान्ति तपाईं सबै हुन सक्छ.
लोरी • डिसेम्बर 21, 2014 मा 4:20 छु • जवाफ
दोस्रो अनुच्छेद म कुनै पनि हालतमा सुअवसर नहीं हुँ भनी भन्न मानिन्छ छ! ओहो.
AJ • अप्रिल 8, 2015 मा 9:49 छु • जवाफ
म कहाँ सुरु गर्न पनि थाहा छैन. त्यो म कसरी महसुस ठीक हो र म पनि अमेरिकी तर कालो हुनुको छैन, मान्छे थिचोमिचो छन् भइरहेको र त्यसपछि पनि अधिकार द्वारा हत्या थाह बस हृदय wrenching छ, त्यसपछि नै अख्तियार टाढा जस्तै संग रही छ यो त गाह्रो कुनै पनि न्याय प्रणालीमा विश्वास बनाउँछ भनेर थाह, साँच्चै. म संलग्न र प्रभावित गर्ने परिवार समानुभूति, दुवै सिकार वा अपराधियों पक्ष बाट.
Tammy • अप्रिल 9, 2015 मा 6:31 बजे • जवाफ
खराब पुलिस यो राम्रो पुलिस लागि खराब गर्दै.
Kianna • सक्छ 20, 2016 मा 4:35 बजे • जवाफ
इन्डोनेसियामा अनलाइन विश्वसनीय • जुलाई 17, 2017 मा 5:39 बजे • जवाफ
म मान्छे लाग्छ गर्नेछ एउटा लेख पढ्दा मन पराउँछन्.
साथै, मलाई टिप्पणी गर्न को लागि अनुमति लागि धन्यवाद!
संगीत नोटहरू • जुलाई 19, 2017 मा 12:25 छु • जवाफ
तर, उहाँले आफ्नो संगीत साँचो बसे र अधिक लेख्न लामो पर्याप्त बस्ने 800 गीतहरू र आफ्नो musics चढ्नु सुन्न
यस गायक दल अडान पहिलो पङ्क्ति pews देखि, जहाँ यसलाई पहिले थियो
प्रतिबन्धित गरिएको. एक शक्तिशाली कम्प्युटरको, केही mics, एक डिजिटल अडियो कार्य केन्द्र, र एक सानो व्यावहारिक ज्ञान,
जो कोहीले रेकर्ड र संगीत वितरण गर्न सक्नुहुन्छ. तर
त्यसपछि, इन्टरनेट को आगमन, ब्रोडब्यान्ड, संकुचित अडियो स्वरूप र थप
पोर्टेबल मिडिया खेलाडीहरू यो उद्योग मा क्रांतिकारी परिवर्तन गर्न नेतृत्व गरेको छ.